China 5XZC-L laboratoara mpanadio masomboly & mpanafatra mpanamboatra sy mpamatsy | SYNMEC
Anarana Fanadiovana ny masomboly laboratoara sy mpanadina
fahafahana 100 kg/ora
Herin'ny mpitsoka rivotra 0,75 kw
Herin'ny vibration 0,37 kw
Frequency vibration 0-400 times/min
lafiny 1500 × 1170 × 2220 mm
Famaritana ny rivotra blower DF-6, ,1210mmHG
Famaritana maotera rivotra blower 2800r/min, 220V, 50Hz
Famaritana maotera vibration YS-7124,1400 r/min
Ny mpanadio voa 5XZC-L & mpanadio dia mpanadio mazava tsara ho an'ny fanadiovana akora sy fanasokajiana. Mety amin'ny fisarahana ny karazana voa rehetra toy ny voa, ny ahitra, ny voninkazo, ny voan-javamaniry, ny ahitra sy ny sisa.
Izy io dia ny rafitry ny efijerin'ny rivotra misy rafitra fanadiovana rivotra eo anoloana sy aoriana. Amin'ny fomba fanadiovana rivotra dia manala ny vovoka, ny loto maivana ary ny voa tsy feno. Ny vatan-kazo sivana dia misy sosona sivana telo izay nampiasaina hanasaraka ny loto lehibe, ny voa lehibe ary ny voa kely maloto. Aorian'ny fikarakarana dia sarahina ireo voa efa voaomana.
Ny milina fanadiovana voa dia ampiasaina indrindra amin'ny karazana fitsapana karazana fanodinana voa rehetra. Ampiasaina betsaka ihany koa izy io amin'ny fanadiovana voa sy fanasokajiana ny habeny. Ny milina dia rafitra rivotra efijery. Izy io miaraka amin'ny lakandrano teo aloha sy aoriana manasaraka fantsona rivotra, mba hahafahanao manadio ny vovoka, ny loto maivana ary ny voam-bary efa voa tsara. Ny vatan-kazo sieve vibrating dia napetraka 3 sosona sivana eo amin`ny ambony, afovoany sy ambany. Ny sosona sieve voalohany dia ampiasaina hanasarahana ny loto lehibe sy voa lehibe. Ny sosona sivana faharoa dia ampiasaina hanavahana ny loto kely sy voa kely. Ny voa sisa dia voa tsara ary mandeha any amin'ny fivoahana lehibe. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny bokotra matetika amin'ny vatan-kazo sivana vibration, azonao atao ny mifehy ny hafainganam-pandehan'ny fitaovana eo amin'ny efijery sieve. Noho izany dia azonao atao tsara ny mitantana ny kalitaon'ny fanadiovana voa amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny fatran'ny vibration ny vatan-kazo. Ny rivotra feno vovoka vokarina aorian'ny fisavana dia havoaka aorian'ny sivana. Ity dia famolavolana fiarovana ny tontolo iainana.
Fanadiovana ny masomboly laboratoara sy fananganana grader:
2. Electromagnetism vibration feeder 3. Vibration vatan-kazo
4. Separator vovoka rivo-doza
5. Panel fanaraha-maso
6. Fiara milina
7. Rafitra fiara
8. Rafitra fanadiovana rivotra indroa
teo aloha: 5XZ-L Laboratory Gravity Separator
Manaraka: 5XWY indented varingarina halavan'ny grader vary manasaraka milina amin'ny halavany
Mpanadio voamadinika sy mpanakitra
Mpanodina ny halavan'ny vary